Home ဆောင်းပါး ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်
အဖွင့် ဖိုရမ် သတင်းနှင့်အင်တာဗျူးများသတင်းများ ဒဏ်ရာသတင်းများ အင်တာဗျူးများ ဆောင်းပါးပွဲကြိုသုံးသပ်ချက် ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက် အထွေထွေဆောင်းပါး မှတ်တမ်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (ဟိုက်လိုက်) မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ပွဲစဉ်များ ပထမအသင်းကစားသမားများ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်များ အထွေထွေAM ခန့် မှန်းပြိုင်ပွဲ AM ခန့်မှန်း ပြိုင်ပွဲ ဇယား Fan Club ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်
ဒီတစ်ခါလည်း ကယ်ခဲ့ပြန်ပေ့ါ ဗန်ပါစီ (သို့) အာဆင်နယ်-စတုတ်ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်	julyseven	ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် အာဆင်နယ်ချစ်ပရိတ်သတ်များကို တောင်းပန်ပါရစေ.........
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်(၉)မှာ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ မဟာပြိုင်ဖက် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း အရှက်တကွဲ ရှုံးနိမ့်မှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အဆင့်(၇)ကို တက်လှမ်းကာ ထိပ်ဆုံးအသင်းတွေနဲ့ အမှတ်ကွာဟမှုကို ကျဉ်းမြောင်းလိုက်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဒီပွဲစဉ်မှာ လူစာရင်း အပြောင်းအလဲ လုပ်ထားပြီး တိုက်စစ်မှူးအဖြစ် ဗန်ပါစီအစား ချာမက်ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ စတုတ်စီးတီးကလည်း သူတို့အားထားရတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ပီတာခရော့ကို အသုံးပြုသွားတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်....
ဆောင်းနဲ့ ကိုစီနီရဲ့ လက်ဆောင်ဂိုးတွေကြောင့် နိုင်ပွဲတွေ့သွားတဲ့ ဘလက်ဘန်း	julyseven	ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်(၅)ကတော့ အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်လို့ ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ အားပေး နေတဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းကတော့ အသင်းပရိတ်သတ်တွေ မျှော်လင့်ထားတဲ့ ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုကို ယူဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ပွဲစဉ်(၅)ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ကစားထားပြီးချိန်မှာ တစ်ပွဲနိုင်၊ တစ်ပွဲသရေ၊ သုံးပွဲရှုံးဆိုတဲ့ ရလဒ်ဟာ ချန်ပီယံဆုကို ချိန်ရွယ်နေတဲ့အသင်းအတွက် လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ အနေအထားတစ်ခုပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီတွေမှာ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ရာသီအစ ရလဒ်ပိုင်းကောင်းမွန်တတ်ပေမယ့် ဒီရာသီကတော့ အသင်း အတွက် အဆိုးရွားဆုံး ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ဆွမ်းဆီးကို ဧည့်ခံခဲ့တဲ့ အမြောက်တပ်သားတွေ တာဝန်ကျေမှု အနေအထား	YGN Gunner	ဒီတပတ်အတွက်ကတော့ အာဆင်နယ်ရဲ့ ကွင်းလည်မောင်းနှင်အားသစ် အာတီတာဟာ တာဝန်ကျေပြွန်တယ်လို့ ဆိုနိုင်လောက်အောင် goal.com ရဲ့ Man of the Match ကော ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ Man of the Match ကိုပါ သိမ်းကြုံးရယူသွားခဲ့ပါတယ်။ ယုတ်တရက် အကောင်းဆုံးမဖြစ်သေးသော်ငြားလည်း အနာတရတွေကို တော်တော်လေးကုစားနိုင်ပြီလို့ယူဆပေမယ့်၊ အမြင်အမျိုးမျိုးနဲ့သဘောထားကွဲလွဲနေဦးမှာပါပဲ။
ဒါကတော့ goal.com ရဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီအပေါ် သုံးသပ်ချက်အနေအထားတွေပါ။ တဖက်အသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေအခြေအနေကို ပူးတွဲတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိတာတော့ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။ အတ္တကြီးတယ်ပဲဆိုဆို အာဆင်နယ် ပရိတ်သတ်တွေအတွက် အာဆင်နယ်က အဓိကပဲမဟုတ်လား။ ကဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ။
အာဆင်နယ် ဘာကြောင့် မန်ယူကို ဂိုးပြတ် ရှုံးသွားတာလဲ ????	Myat Now Oo	မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ၈း၂ အာဆင်နယ် အဲဒီပွဲမှာ ဘယ်သူမှားလဲ ဘယ်သူကြောင့်လဲ ဘယ်သူတရားခံလဲ ဆိုတာကို ကျနော် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း အာဆင်ဝင်းဂါးကြောင့်လို့ မပြောပါဘူး။ ဒီရလဒ်မျိုး (၈-၂) ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီး ထွက်လာတာ တစ်သင်းလုံးရဲ့ အမှားမကင်းပါဘူး။
အဓိက ကတော့ ဖာဘရီဂတ်စ်၊ နာစရီ၊ ကလစ်ချီ၊ အီဘိုးတို့ကို မထိန်းထားပဲ တခြားကလပ် အသင်းတွေကို ဈေးကောင်းရတယ်ဆိုပြီး အဆင့်မြင့်တဲ့ ကစားသမား ၄ယောက်ကို လက်လွတ်စပယ် ရောင်းလိုက်ပြီး အဆင့်မြင့်မြင့် ကစားသမားတွေ အချိန်မှီ ပြန်ထပ်မ၀ယ်တာကိုက စပြီးမှားတာပါ။ Read more... Comments (9)
ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဂန်းနားများ	julyseven	0:2ဘာကလေပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ဒုတိယပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ လီဗာလ်ပူးအသင်းတို့ရဲ့ ပွဲစဉ်မှာတော့ လီဗာပူးလ်အသင်းက အာဆင်နယ်အသင်းကို အာရွန်ရမ်ဆေးရဲ့ own goal နဲ့အတူ မီယာလက် ရဲ့ သွင်းဂိုးကြောင့် နှစ်ဂိုး မရှိနဲ့ အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်မှာ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ပွဲပယ်ခံထားရတဲ့ ကစားသမားတွေနေရာမှာ လူသစ်တွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ ကစားသွားတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်....
ငှက်ကျားပစ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့် တစ်ကောင်မှမရခဲ့တဲ့ ဂန်းနားများ
အာဆင်နယ် - အက်စတွန်ဗီလာ ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်
စိတ်ပျက်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ ခြေစွမ်းနဲ့ ရှုံးနိမ့်လာကြတဲ့ ဂန်းနားများ (သို့) စတုတ် ၃ - ၁ အာဆင်နယ် ပွဲပြီး
ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် ထိုက်တန်စွာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ် နှင့် သူရဲကောင်း အာရွန်ရမ်ဆေး (သို့) အာနိုး
« Start Prev 1234567 8910 Next End »	Page6of 19	Copyright © 2016 Arsenal Myanmar | All of Arsenal fans from Myanmar.. All Rights Reserved. Originated by Thatoe.